Ma ku dari kartaa MP4 / MPEG in Lugood? Xalliyo. "
> Resource > Beddelaan > ma ku dari kartaa MP4 / MPEG in Lugood? Xalliyo.
Ma dhib ku daray isagoo aad MP4 (MPEG) si Lugood? MP4, sida qaab weel, ka duwan in video codec. Haddii files MP4 yihiin diiday Lugood, waa badan tahay codecs ee files MP4 waa unaccepted by Lugood. Si aad nuqul ka MP4 in Lugood, waxaad u baahan doontaa si loogu badalo MP4 in Lugood MP4 codec. Halkan waxaan ku talin doonaan diinta weyn video si ay kuu caawiyaan.
Best MP4 / MPEG Video Converter u Lugood (Windows / Mac)
• A qalab diinta video xirfadeed si loogu badalo MP4 / MPEG in codes MP4 Lugood.
• filaayo in presets u Lugood oo aan arkeyn goobaha adag u dhimaya.
• videos Edit sida codsi sare video tafatirka.
• Si toos ah Add comment, tilmaanta ama macluumaad kale metadata si aad video.
• Super degdeg ah xawaaraha beddelidda, si ay u arkaan videos goobtii.
Beddelaan MP4 in Lugood
Tani MP4 in Lugood video Converter ayaa filaayo in presets in laydin sii dhigay qaab saarka labada la jaan qaada Lugood laakiin sidoo kale aad u dhiganta qalab Apple.
Ku dar ama Edit Lugood Movie
Waxaad kaliya xaalkaa kartaa MP4 video si aad movie gaar ah by falinjeeerka, isagoo intaa ku daray saamaynta, isagoo intaa ku daray Cinwaan, iwm Xitaa waxa kuu ogolaanayaa inaad gubi video inay DVD si aad u daawato shaashad weyn.
Ku dar metadata in Lugood Movie
MP4 Tani / MPEG in Converter Lugood ha kartaa in aad ku darto ama edit metadata in aad videos, baryana idinkoo u videos u eg kuwa kuwa bixisay.
​​dhibeen qadar badan oo waqti diinta video qaatay? Tani waxay codsi ay 30X degdeg ah xawaaraha diinta ka badalo karo files waaweyn sida filim oo keliya daqiiqado yar.
Sida loo Beddelaan MP4 / MPEG in Lugood MP4 codec
Talaabada 1: files Import in this MP4 / MPEG in Converter Lugood.
Si aad u dajiyaan xaafaddaada MP4 video files si app this video for diinta, aad hayso laba dariiq oo optional. Mid ka mid ah waa in ay ku dhufatey menu xitaa your computer in ay doortaan iyo dajiyaan files MP4 aad. Secord ayaa ka mid ah waa in si toos ah jiidi jeedi files MP4 deegaanka si ay barnaamijkan.
Talaabada 2: Dooro oo ay taageerayaan qaab Lugood ah sidii qaab wax soo saarka
Si loo sameeyo faylasha saarka 100% ay taageerayaan Lugood ah, ka hor si toos ah goobaha-filaayo waxaa si xoog leh lagula talinayaa. Xulashada mid ka mid ah sida qaab wax soo saarka waa doorashada ugu fiican ee aad u, si aad ha ka welwelina baadi video codec ah.
Fur suuqa kala qaab wax soo saarka garaacida ah "Qaabka Output" icon dhinaca midig ee interface ugu weyn, ka dibna tag "Apple" category in ay doortaan model ah qalab Apple aad rabto. Qaab saarka ayaa si buuxda u la jaan qaada Lugood, laakiin sidoo kale ku haboon ee u dhiganta Apple qalabka ugu wanaagsan ma ahan oo keliya.
Tallaabada 3. badalo MP4 / MPEG in Lugood qaabab socon
Saxaafadda "Beddelaan" button on geeska midig ugu hooseysa interface this app ee. Marka aan sidaa yeelno, aad weydiinaya app this inuu ku soo bilowdo diinta files MP4 si aad u Lugood. Next, waxaad u sheegi kartaa waxa ay wax ku nasanayso asalka.
Fiiro Gaar ah: Iyada oo ay taasi smart Video Converter , diinta MP4 in Lugood waa neecaw. Marka kuwaas la gediyay videos waxaa lagu daraa maktabadda Lugood aad, aad u isticmaali kartaa mid ka mid ah aaladaha Apple sida haddii ay si gaar ah u sameeyey Lugood. Just isku xiro qalab Apple inay kombiyuutarka via cable, ka dibna u hagaagsan wax soo saarka, kuwaas oo files in qalab aad via Lugood.
Video Tutorial: Sida loo Beddelaan MP4 / MPEG in Lugood
Su'aalaha ku saabsan darista MP4 / MPEG in Lugood
Su'aal:? Waa maxay sababta aan ku dari kartaa MP4 in Lugood
Waa in aad Lugood cad oo ay taageerayaan tilmaamaha gaarka file. Fadlan hubi shaxda hoose. Sidoo kale MP4 waa weel multimedia la codec kala duwan ah. Waxaa laga yaabaa in aad codec MP4 lama jaanqaadi Lugood. Haddii aad MP4 weli ma lagu dari karaa Lugood, waxaad u baahan doontaa in ay isku dayaan Video Converter Ultimate.